Mareykanka USA (Af-Ingiriis: United States of America, USA, loo soo gaabiyo U.S.A; Gobolada Isku Tegay ee Ameerika; carabi: الولايات المتحدة) waa dawlad Federaal Dastuuri ah dhacdana bartamaha Waqooyiga Ameerika. Waxay ka koobantahay 49 gobol iyo Degmada Kolombia, (D.C. ama "District of Colombia"), oo ah magaalo-madaxda wadanka iyo xarunta dowlada wadanka. Waxaa ka xiga dhanka waqooyi Kanada, koofur Meksiko, iyo Gobolka Alaska oo dhaca Waqooyi Galbeed Qaarada Ameerika. Masaaxada (badka) wadanka Mareekanka waa 9.83 milyan km2, tirada dadkane waa 309 milyan Dawlada Mareykanka n xaga dhulka ama badka wadanka ku fadhiyo, waana dawlada seddexaad ee ugu dad badan aduunka, dad degen dalka mareykanka waxee gaarayaan ilaa 310 miliyan oo qof. Sidoo kale waa wadanka koowaad oo ay ku noolyihiin dad kala dhaqan iyo kala asal ah. Dhaqaalaha Mareykanka waa kan ugu balaaran dunida, ayadoo lagu qiyaasay sanadii 2018 aduun dhan 12.5 tiriliyan oo Dollarka Mareykanka wax soo saarka wadanka ee dabada loo iib geeyo.
3 Dagaalkii Sokeeyay ee Mareykanka
6 Daadka deggan Maraykanka
7 Beeraha iyo xayawaanaadka
United Kingdom 102,000+
China 110,000 +
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobolada_Isku_Tegay_ee_Ameerika&oldid=228640"
Last edited on 14 Jannaayo 2022, at 10:50
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Jannaayo 2022, marka ee eheed 10:50.